ATOM dia mpanamboatra matihanina mpampifandray elektronika mifangaro izay mampiditra ny R&D, ny famokarana ary ny varotra.
Manarona faritra 30000 metatra toradroa izy ary manana mpiasa maherin'ny 500, misy teknisiana matihanina zato eo ho eo amin'izy ireo, manana fitaovana fanamboarana mandroso sy fitaovana fitiliana be pitsiny izahay, manokana amin'ny fampiroboroboana ireo mpampifandray ireo karatra SD, mpampifandray TF Card, Fampifandraisana SIM karatra, FPC Connectors, USB Connectors, mpampifandray amin'ny board to board, tariby mifamatotra amin'ny board, tariby hampifandray ireo mpampitohy, ireo mpampitohy batterie, ireo mpampitohy RF, ireo mpampitohy HDMI, ireo mpampitohy lohateny Pin ary ireo mpampitohy mpampitohy vehivavy, Taorian'ny firoboroboan'ny taona, ny ATOM dia manana ekipa teknisiana zokiny efa za-draharaha, matihanina sy mahatoky, 80% -n'ny vokatra dia famokarana mandeha ho azy, Izay afaka mahafeno ny fepetra takin'ny mpanjifa.
Ny finoana, ny famoronana, ny fitohizan-tena ary ny fanompoana dia ny fanahin'ny orinasa sy ny tanjon'ny tolona ATOM Technology.
Nandritra ny ezaka an-taonany maro, ATOM dia namorona marika «ATOM» manokana any Shina. Nahomby tamin'ny ISO9001 / ISO14001 / IATF16949 / ROHS / SGS fanamarinana sy rafitra fanamarinana hafa ary nahazo mari-boninahitra maro toy ny orinasa teknolojia avo lenta, orinasam-teknolojia avo lenta any Shenzhen. Taorian'izay dia nanomboka tamim-boninahitra sy diany nanonofy i ATOM ary nahazo fitomboana haingana tampoka tamin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana sy fetrany miavaka.
Ny vokatra dia ampiharina amin'ny saha mihoatra ny roapolo: vokatra solosaina sy peripheral, vokatra elektronika niomerika, vokatra elektronika fifandraisana, vokatra elektronika fiara, vokatra elektronika fantsona, vokatra elektronika ara-pahasalamana sy fitaovana elektronika an-trano, vokatra azo antoka sy fiarovana ary vokatra fanekena tarehy sns. Ny vokatra dia malaza amidy any Asia, Eropa ary Amerika.
Miaro ny “fanavaozana ny olona voalohany sy ny teknika” ny ATOM, ary manenjika ny asa mafy, azo tanterahina, tsara ary mahery setra. ATOM sy ianao, ny mpanjifa sarobidy aminay, dia mandroso amin'ny ho avy mahafinaritra amin'ny alàlan'ny dingana tsy miova sy ny fomba marina.